Photoshop Tutorial: Sida loo abuuro Muqaal ah oo la Photoshop
> Resource > Talooyin > Sida loo abuuro Muqaal ah oo la Photoshop
Adobe Photoshop waa cabbirka barnaamijka tafatirka sawir. Iyadoo Photoshop, sidoo kale wax samayn kartid la xiriira in ay tafatir image iyo in la wadaago, oo ay ku jiraan slideshow photo, dabcan. Halkan waxaad ku baran doontaa sida loo abuuro slideshow la Photoshop.
Tani slideshow Photoshop tutorial ku haboon yahay Adobe Photoshop 7, Adobe Photoshop Cunsurka, Adobe Photoshop CS, CS2, CS3, CS4 iyo CS5. Ma aha in slideshow ku abuuray Photoshop (marka laga reebo Photoshop Cunsurka) waxay u baahan tahay Adobe Reader (version 6 ama ka sareeya) inuu u ciyaaro.
Eeg sidoo kale : Samee Muqaal A la Music , Photos iyo Videos
Samee Muqaal la Photoshop 7, CS -CS3
In dheeraad ah "hore" version of Photoshop, waxaa laguu ogolyahay in la abuuro slideshow PDF ah inay soo bandhigto aad sawiro baaraandegi. In sidaa la yeelo, u tag File / qalabayn / PDF bandhigid, oo raacaya tilmaamaha ku-shaashadda si ay u sameeyaan slideshow ah PDF oo laga daawan karo iyada oo PDF akhristaha ugu, laakiin Adobe Reader lagu talinayaa.
Samee Muqaal la Photoshop CS 4 iyo CS5
Tan iyo Photoshop CS4 (oo ay ku jiraan Photoshop CS5), doorasho PDF bandhigid ayaa ku biiray File / Browse in Bridge , ama si toos ah guji badhanka Bridge ku bar ah menu hogaanka Photoshop. Plus, in ka badan fursadaha u banaan in ay astaysto slideshow Photoshop ah. Ka dib markii PDF duubey ayaa la abuuray. Oo waxay noqon doonaan sida caadiga ah u furan yahay in hab slideshow la Adobe Reader. Haddii aan, hesho fursada buuxa screen inuu u ciyaaro aad PDF slideshow.
Samee Muqaal la Photoshop Cunsurka
Way sahlan tahay in la sameeyo slideshow Photoshop Cunsurka badan koob ee kale. Waxay bixisaa ah Wizard Slide Show in la sameeyo duubey Photoshop. Waxaad ku heli kartaa adigoo maraya, Waxaad samaysataa Photo Creatioins Slide Show. Xitaa Waxaad ku dari kartaa music sida asalka, iyo wax soo saarka slideshow video si aad ula wadaagto dadka kale.
Photoshop Muqaal Gunaanad
PDF bandhigga waa hab gaar ah si ay u muujiyaan aad curiyay Photoshop. Laakiin marka la barbar dhigo Muqaal Video abuuray Photoshop Cunsurka, waxaan dooran lahaa warqadda. Iyadoo Photoshop Cunsurka, waxaad samayn kartaa slideshow dhab ah - oo ay ku jiraan muusikada iyo dhoofinta in video - si aad ula wadaagto dadka kale masterpiece. Si kale si ay u muujiyaan aad curiyay Photoshop waa in la sameeyo soo duubey u website .